हो,सि,यार ! भुलेर पनि यी ७ व्यक्तिले नखानुहोस् अनार ! - Nawalpur Dainik
हो,सि,यार ! भुलेर पनि यी ७ व्यक्तिले नखानुहोस् अनार !
एजेन्सी । हरेक फलफुल खानु स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। विभिन्न फलफुलको सेवनले स्वस्थ्यलाई विभिन्न लाभ पु-याईरहेको हुन्छ । तर केहि फलफुल यस्ता रोगीहरुले नखानु राम्रो हुन्छ।अनारले शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ । अनारमा फाइबर, भिटामिन ए, भिटामिन सि, भिटामिन के, फोलिक एसिड र एन्टिअक्सिडेन्ट भरपुर हुन्छ । अनार स्वास्थ्यका लागि मात्र नभई सौन्दर्यका लागि पनि उतिकै फाइदाजनक छ ।
अनारको नियमित सेवनले मानिसमा यौन क्षमतामा वृद्धि हुने, स्मरण शक्ति बढाउने, हड्डी मजबुत बनाउने तथा सरीरको दुखाई कम गर्ने बताइन्छ । तर यी ७ व्यक्तिले अनारले खानु राम्रो हुदैन। स्वस्थ्यमा सुधार आउनुको साटो झन् बिग्रिन सक्छ।
दम रोगी– दम रोगीले अनार खादा दम झन् बढ्ने हुदा दम रोगीले अनार खानु हुदैन । मधुमेह रोगी – अनार खानाले सुगरको मात्रा बढ्ने हुदा मधुमेह रोगीले अनार खानु हुदैन ।प्रेसर लो हुने व्यक्ति- अनारमा पाइने एंटीऑक्सीडेंट्सका कारण प्रेसर लो हुने हुँदा प्रेसर लो हुने ब्यक्तिले अनार खानु हुदैन । कलेजोमा समस्या भएका व्यक्ति – अनारमा पाइने एंजाइम्सले कलेजोको एंजाइम्समा असर पुर्याउने हुनाले कलेजोमा समस्या भएका व्यक्तिले अनार खानु हुदैन ।
कब्जियत– अनारमा फाईबर्सको मात्रा अधिक हुने हुदा कब्जियत र पेटमा ग्यास बढाउछ । त्यसैले अनार खानु हुदैन ।औषधि लिइरहेको व्यक्ति – यदि तपाई बल्ड प्रेसर वा कोलेस्ट्रोल कम गर्ने औषधि लिनु हुन्छ भने अनार खानु हुदैन । अनार खादा औषधिले काम गर्दैन ।तौल घटाउन चाहने व्यक्ति- तौल घटाउन चाहने व्यक्तिले अनार नखानु राम्रो मानिन्छ । किनभने अनार खादा तौल घट्नुको साटो उल्टो बढ्न थाल्छ ।
Prevगर्भावस्थामा खान नहुने यी फलफूल !! सबैले जान्नैपर्ने कुरा! पढेर सेयर गरौँ
Nextभिजिट भिसामा मलेसिया गएर लुकेका वैशाख ९ सम्म स्वदेश नफर्किए कडा कार’वाही